FARIINTA HIV: PAC oo gacan ka heleysa WFP ayaa idiin soo gudbinaysa (daawo) – Radio Daljir
Diseembar 4, 2021 8:01 b 0
Dadka la nool HIV ee ku nool Puntland waxay si wada jir ah ugu baaqayaan dhammaan shacabka iyo dawladda Puntland in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo loo siman yahay, Adeegyada kaabayaasha nolosha oo ay kamid yihiin kabista nolol maalmeedka bulshada, lacagaha kaashka loo bixiyo, mashaariicda guryeynta, caymiska caafimaadka, Fursadaha shaqo, gargaar sharci iyo xuquuq loo siman yahay oo ay ka helaan barnaamijyada kale ee badqabka bulshada.
Siyaasadaha badqabka bulshada ee dawlada waa inay ku jiraan aqoonsashada, xaquuqda dadka la nool HIV. Tani waxay ka caawin doontaa inay la qabsadaan saamaynta cudurka iyaga iyo qoysaskooda. Dadweynaha waxaa loogu baaqayaa inay ka shaqeeyaan sidii meesha looga saari lahaa faquuqa iyo takoorka ka dhanka ah dadka la nool HIV iyo qoysaskooda.
Dadka la nool HIV waxay xaq u leeyihiin inay qaataan go’aamo xog ogaal ah oo ku saabsan naftooda.
Fariintan waxaa idiin soo gudbinaysa Hay’adda la dagaalabka AIDs-ka Puntland ee PAC oo gacan ka heleysa WFP waxaadna kala socotaan warbaahinta Daljir